Urban Terror lalao mpitifitra an-tserasera marobe mahay multiplayer | Avy amin'ny Linux
Urban Terror lalao mpitifitra an-tserasera marobe marobe
Darkcrizt | | Games
Urban Terror dia lalao mpitifitra olona voalohany maimaim-poana. Urban Terror uampiasao ny motera ioquake3, ary koa ho famenon'ny Quake III Arena.
Ity lalao ity mifantoka amin'ny fampifangaroana ny zava-misy amin'ny hetsika mpitifitra haingana, toy ny Quake III Arena sy ny Unreal Tournament. Ny zava-misy ao amin'ny mod dia nampidirina tamin'ny alàlan'ny fanovana maro.
1 Momba ny fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
1.1 Fepetra momba ny rafitra
2 Ahoana no hametrahana Urban Terror amin'ny fizarana Linux samihafa?
Momba ny fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
Ny fitaovam-piadiana misy dia tsy dia marim-pototra rehefa voaroaka rehefa mihetsika ary mitaky famerenana aorian'ny fandaniana azy. Voafetra ny isan'ny fitaovam-piadiana sy fitaovana hafa azo entina.
Ara-dalàna ihany koa ny fahavoazana, miorina amin'ny fizarana ny tanjon'ny mpilalao ho any amin'ny faritra misaraka. Ho fanampin'ny rafitra fanimbana, ny ratra dia mila fehin-kibo sy ratra amin'ny tongotra na tongotra manemotra tanteraka ny mpilalao mandra-pamehezany.
ihany koa misy ny rafitra fanoherana ary reraka amin'ny hetsika toy ny mihazakazaka na mitsambikina; Ny fikolokoloana dia ahafahan'ny bara fanoherana ho sitrana haingana kokoa.
Miankina amin'ny sarintany nolalaovina, ny tontolo iainana ivelany koa dia misy zava-misy ary mety misy ny toetr'andro toy ny orana na oram-panala.
Ny maody lalao dia ahitana:
Maimaimpoana ho an'ny rehetra.
Sambory ny sainam-pirenena.
Sambory ary tazomy.
Araho ny mpitarika.
Ny lalao dia mitazona taham-pahavitrihana avo lenta ary manome sary tena tsara, na dia misy sarintany tsara noho ny hafa aza.
Manolotra fiasa hafa antenainao ihany koa izy, toy ny multiplayer (izay mampiavaka ny lalao, satria tsy misy maody mpilalao tokana), sy fitaovam-piadiana maro isafidianana.
Fepetra momba ny rafitra
Mba hampandeha ity lalao ity amin'ny solosainao, Ilaina ny manana farafaharatsiny mba takiana amin'ny fampiharana azy:
CPU: Pentium 4 1.2GHz na avo kokoa.
RAM: 256MBs (512MBs tena atoro anao)
VID: karatra NVidia na ATI misy 128 MB RAM (256 MB na mihoatra, tena atoro anao).
HDD: 50GB, fa vao mainka tsara kokoa ho an'ny tier fanampiny.
Ahoana no hametrahana Urban Terror amin'ny fizarana Linux samihafa?
Amin'ny fomba ofisialy hahafahanao mametraka ity lalao ity amin'ny fizarana Linux anay Tsy maintsy mandeha any amin'ny tranonkalan'ilay tetikasa izahay ary ao amin'ny fizarana fampidinana azy dia hahita ireo rohy hampidina azy io isika.
Ny haben'ny lalao dia feno habe 1.4 GB ka mety maharitra minitra vitsy ny fisintomana.
Amin'ny faran'ny fampidinana dia tsy mila mamaha ny fonosana ianao ary ao anatiny no misy ny mpandefa installer.
Fomba iray hafa hametrahana ity lalao ity amin'ny rafitray miaraka amin'ny alàlan'ny fonosana Snap. Noho izany dia mila manana fanohanana fotsiny ianao hametrahana an'ity karazana rindranasa ity amin'ny rafitrao.
Ao amin'ny terminal iray dia hanatanteraka ity baiko manaraka ity isika hanatanterahana ny fametrahana:
sudo snap install urban-terror
Eto isika dia tsy maintsy miandry minitra vitsy, satria ny fampidinana ny lalao dia mihoatra ny 1GB.
Raha te hijery raha misy fanavaozana sy mampihatra azy io dia azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity ao anaty terminal:
sudo snap refresh urban-terror
Ary vonona miaraka amin'izany isika afaka manomboka milalao ity lalao ity amin'ny rafitray.
Rehefa manomboka ny lalao ianao, Hangatahana izy ireo hiditra solonanarana hahafantarana anao amin'ny lalao rehetra ataonao.
Ny interface interface dia mizara ho fizarana roa, ivelan'ny menus lalao sy amin'ny menus an'ny lalao.
Ireo roa ireo dia azo ampiasaina hanovana ny fanaraha-maso, ny rafitry ny rafitra, ny fikirakiran'ny mpilalao ary ny fikirana hafa azo ampiharina.
Ny menio fanovana dia ahafahanao manova ny mombamomba anao sy ny fikirana amin'ny kitendry miaraka amin'ny fanovana ny soatoavin'ny horonan-tsary sy audio anao.
Hanombohana mpizara iray, azon'izy ireo atao ny manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny interface interface.
"Mods hafa" dia mampiseho ireo mods Quake III napetraka ao amin'ny solo-sainanao.
Raha vao manomboka milalao an-tserasera isika dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra "Play Online".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Urban Terror lalao mpitifitra an-tserasera marobe marobe
Bilaogera: matihanina amin'ny ho avy. Anisan'ireo maro hafa!
Ny Purism Libraryem 5 dia ho tonga amin'ny telovolana fahatelo amin'ny 2019